November 2021 - S3k Network
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ..
ထိုင်းခ်ဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရွယ္ထားပါ…. ထီပေါက် ခ်ဲပေါက္ဂါထာတော် ၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗ္ဗလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ထေရဿ အနုဘာဝေန၊ သေဗ္ဗ ဟောန္တု ပိယံ မမ။ ၂။သီဝလိ စ မဟာဝီရော ယေ ယေ ပဿန္တု […]
ချစ်သူနှင့် ၇ နှစ်ကြာအတူနေပြီး တားဆေးများကိုနေ့စဉ်သောက်ခဲ့ရာ…
ခဈြသူနှငျ့ ၇ နှဈကွာအတူနပွေီး တားဆေးမြားကိုနစေ့ဥျသောကျခဲ့ရာ ကနျြးမာရေးထိခိုကျပွီး ဆေးရုံတကျရသောအခါ ကလေးမရနိုငျတော့ကွောငျး သိရလိုကျရသဖွငျ့ ခဈြသူ၏စှနျ့ပဈခွငျးကိုခံရသော မိနျးကလေး။ ယနခေ့တျေကွီးထဲတှငျ လူငယျအခြို့၏ ဖွဈပကျြနပေုံမြားအကွောငျးကို လူအမြားစုတို့လညျး သတိထားမိကွမညျဟု ထငျမိပါတယျ။ ယခုတှငျတော့ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ ကောငျမလေးတဈဦးဟာ သူမမစဥျးစားမိခဲ့သညျ့ မိုကျမဲသောအဖွဈကွောငျ့ နစေ့ဥျငိုကွှေးရငျးနောငျတရနခေဲ့ရပါတယျ။ ကောငျမလေးဟာ သူ၏ခဈြသူနှငျ့အတူ ၇ […]
တပျခဈြသူ အမတှနေဲ့ ရပျတညျခကျြမတူဘဲ ပွညျသူဘကျကရပျ တညျနတေဲ့ သမီးလေးကို မှေးရ ကြိုးနပျ ကွောငျးပွောလာတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ ရဲ့မိခငျကွီး
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တပ်ချစ်သူ အမတွေနဲ့ ရပ်တည်ချက်မတူဘဲ ပြည်သူဘက်ကရပ် တည်နေတဲ့ သမီးလေးကို မွေးရ ကျိုးနပ် ကြောင်းပြောလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင် ရဲ့မိခင်ကြီး ကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့လေးကိုချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေ အပြည့်နဲ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာ […]
ညီညီ ကွယ်လွန်ခြင်း(၉)လပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့အတူ ရင်နင့်စရာစကားလေးကို ပြောလာခဲ့တဲ့ ကိုကို
လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင် ကျဆုံး ခဲ့တဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းလေး ညီညီအောင်ထက်နိုင် ကိုတော့ အမှတ် တရရှိနေဦးမှာပါ။ ညီညီအောင်ထက်နိုင် ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၂၈) ရက်နေ့က ကျဆုံး သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့မှာတော့ ကွယ်လွန်ခြင်း (၉)လပြည့်ခဲ့ပြီပဲ […]
ထိုင်းထီနှစ်စောင်တွဲ ထိုင်းဘတ်ငွေ(12)သန်း ကံထူးရှင်ဇနီးမောင်နှံက ဘတ်(11)သန်းကိုမြန်မာပြည်ပို့ပြီး ကျန်ငွေ( 1 )သန်းကို နေရာစုံလိုက်လှူသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားလို့ ဒီပိုစ့်လေးဖြင့်ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါသည်။ မဟာချိုင်ဝပ်ထစ် ရွှေတိဂုံစေတီပုံတူတည်နေသော နေရာသို့ ဘိလပ်မြေအိတ်များ AAC ဂေဟာတွင်ခိုလှုံနေသော အခက်အခဲရှိ မြန်မာလုပ်သားများအားအလှူ လခမရသော AAC အမာခံအဖွဲ့သားများကို တစ်ဦးချင်းထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်း။ ခြေလက်မသန်စွမ်းသူများအတွက် သုံးစွဲရန်လှူပေးခြင်းAAC ဂေဟာရှိ […]
ယွန်းယွန်းကို ပြောဆိုနေကြသူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးထားပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး
အမျိုးသမီးတိုင်း ကြုံတတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဒီအသက် ဒီအရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာတွေပါ တစ်ခါတလေ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက် ထိမ်းချုပ်ရခက်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သာယာမှုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ နောက်ဆုတ်ရင်းက ရှေ့တိုးနေမိတတ်တဲ့ အခြေအနေ‌တွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ် မိန်းမချင်း အဲ့အသံဖိုင်တွေ အားရပါးရရှယ်ပြီး blame နေတာ ကိုယ်တစ်ဦးထဲ သဘောအရတော့ လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး […]
အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနလေတို့ရဲ့ My Day တိုက်ပွဲ….
My Day တိုက်ပွဲလေး သိပီးကြပီလား အမေစုသတင်း ဖုံးသွားမှာစိုးလို့ အကြီးကြီး ပွဲဖြစ်သွားမယ့်ဟာ ချပြမလို့ဟာ မချပေးတော့ဖူး အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသွားရင်မကောင်းဘူးလေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ပြောပီဆိုကတည်းက တစ်ဖက်လူရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖိပီး ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် My Day တိုက်ပွဲလေး သိပီးကြပီလား အမေစုသတင်း ဖုံးသွားမှာစိုးလို့ […]
အိမျမှာ ဒီလိုအပငျတှရှေိရငျ ခကျြခငျြး ဖကျြစီးပဈသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး…
အိမျမှာ ဒီလိုအပငျတှရှေိရငျ ခကျြခငျြး ဖကျြစီးပဈသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး ကလေးရှိတဲ့ မိသားစုတှအေတှကျ ဆငျခွငျနိုငျဖို့ အောကျပါ ရှကျလှပငျ အကွောငျး ဘာသာပွနျ ဖျောပွ လိုကျပါတယျ။ အိမျတှငျး ခွံတှငျး ရုံးတှငျး နရောတှမှော ရှကျလှပငျ အမြိုးမြိုးကို အလှပနျး အိုးတှေ အဖွဈ စိုကျထားလေ့ ရှိကွတယျ။ […]
ထူးဆနျးသော အိပျမကျ (၁၂) မြိုးရဲ့ နိမိတျမြား ၁။ သှားကြိုးတယျလို့ အိပျမကျမကျရငျ လူပုံ အလယျမှာ အရှကျတကှဲ ဖွဈတတျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာလညျး ပဋိပက်ခလေးတှေ ဖွဈတတျတယျ။ အိမျထောငျသညျ အမြိုးသမီးတှေ သှားကြိုးတယျ လို့ အိပျမကျမကျရငျ ကိုယျဝနျဆောငျရမယျ့ နိမိတျဖွဈပါတယျ။ ၂။ အမွငျ့ကနေ ပွုတျကတြယျလို့ […]